Pa-O National Organization: ကျွန်တော်တို့တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ် ဖြစ်ပြီလား…??
တောင်ကြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇)ရက်
အရှင်တေဇနိယ(အုတ်ဖို) ရေးသားသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် “နောင်အခါ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ(၅) မျိုး ရှိလာလိမ့်မည်ဟု မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဟောထားကြောင်း” ဆိုသည့်အကြောင်းကို ဖတ်ရှုခဲ့ဖူးပါ၏။ ၎င်း(၅)မျိုးမှာ ကုလဗုဒ္ဓဘာသာ၊ လာဘဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဘယဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သဒ္ဓါဓိကဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပညာဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဖြစ်သည်ဟု အရှင်တေဇနိယ(အုတ်ဖို)က တစ်မျိုးခြင်းစီကို အကျယ်တဝင့် ရေးသားရှင်းပြထားပါသည်။ သို့သော် စာရေးသူအနေနှင့် ဤဗုဒ္ဓသာသာ (၅)မျိုးကို အကျဉ်းချုပ် အနေဖြင့်သာတင်ပြလိုပါ၏။ အကြောင်းမှာ စာရေးသူအနေနှင့် ဤဗုဒ္ဓသာသာ (၅)မျိုးအကြောင်းကို သိစေချင်တာထက် မိမိတို့သည် မည်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်တွင် ရှိနေသည်ကို သုံးသပ်စေလိုခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံး ကုလဗုဒ္ဓဘာသာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမည်ဆိုလျှင် မိရိုးဖလာလက်ဆင့်ကမ်းခံရခြင်းဟု ပြောရမည်ထင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဗုဒ္ဓသာသာဝင် မိဘနှစ်ပါးက မွေးထုတ်လိုက်သော ကလေးသည် အလိုအလျောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သွားသကဲ့သို့ အခြားခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်ဝင်၊ ဟိန္ဒူတို့၏ ကလေးသည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အဖေအမေ၊ ဘိုးဘွားခေတ်က ကိုးကွယ်ခဲ့သောကြောင့် မိမိအနေဖြင့် လိုက်ကိုးကွယ်ပြီး မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ကိုးကွယ်ရသည်ကိုလည်း သေချာမသိ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရကိုလည်းမသိ၊ လုပ်တော့လုပ်နေသည် ဘာလုပ်နေမှန်း သေချာမသိသည့် အဖြစ်မျိုးကိုဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရလျှင် ပညာမပါသည့် အဖြစ်မျိုးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယလာဘဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတိုးပွားရန်အတွက် ကိုးကွယ်ခြင်းဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်မှ စီးပွားတက်မည်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေမည်ဟု ထင်မြင်သူများဖြစ်သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဗေဒင်၊ နတ်တို့ကိုလည်း သက်ဝင်ယုံကြည် ကိုးကွယ်သူ များဖြစ်သည်။ နောက်ဘယဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုသည်မှာ ဘေးရန်အန္တရာယ်လွတ်ကင်းလိုခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အန္တရာယ်ကင်းရန်၊ ကျန်းမာရန်၊ အသက်ရှည်ရန်အတွက် ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤကုလဗုဒ္ဓဘာသာ၊ လာဘဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဘယဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည် အကျိုးမပြုသော၊ အဆင့်နိမ့်သော ဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်သည်ဟု အရှင်တေဇနိယ(အုတ်ဖို)က ရေးသားထားပါသည်။
သဒ္ဓါဓိကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ သဒ္ဓါတရား(ယုံကြည်ချက်)ကို အခြေခံခြင်းဟုဆိုနိုင်သည်။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူသော ရတနာ(၃)ပါးကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ဖြစ်သည်။ ကောင်းမှုလုပ်လျှင် ကောင်းကျိုးရမည်။ မကောင်းမှုလုပ်လျှင် ဆိုးကျိုးရမည်ဆိုသည်ကို လက်ခံယုံကြည်သူများလည်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များကို သိရှိသူ၊ ယုံကြည်သူများ ဖြစ်သည်။ သဒ္ဓါတရားသည် ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းသောယုံကြည်ချက်နှင့် မကောင်းသော ယုံကြည်ချက်များလည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ယုံကြည်လျှင် သမ္မာသဒ္ဓါဟုခေါ်ဆိုပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် မယုံကြည်ပါက ကုလ၊ လာဘ၊ ဘယ စသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆင့်တွင်သာရှိနေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းကို မိစ္ဆာသဒ္ဓါဟု ဆိုလိုပါသည်။ နောက် ပညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုသည်မှာ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသော သစ္စာတရားလေးပါးတရားကို သေချာသိရှိပြီး ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံသူဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် အယုံလွယ်သူမဟုတ်၊ မိမိကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကျင့်ကြံပြီးမှသာ ပညာနှင့် ဆုံးဖြတ်သူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သဒ္ဓါဓိကဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာသည် အထက်တန်းကျပြီး မြင့်မြတ်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဟု လူသိများသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အထက်တွင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ(၅)မျိုးတွင် မည်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်တွင် ရှိနေသနည်း။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ(၅)မျိုးစလုံး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေပြီလား။ စဉ်းစားစရာရှိလာပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထိုဗုဒ္ဓဘာသာ (၅)မျိုးသည် ရှိကိုရှိလာမည့် သဘောရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် မိမိတို့သည် မည်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲတွင် ပါဝင်ရမည်နှင့် ပါဝင်နေသည်ကို သာသိရှိရန်သာ ကျန်ပါတော့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တချို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဗေဒင်ယုံကြည်မှု၊ တောင်ပြုံးပွဲကဲ့သို့ နတ်ကိုးကွယ်မှုများကို အဘယ်ကြောင့် အရှုးအမှုး(crazy)ဖြစ်နေရသနည်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာပွဲအမည်တပ်ပြီး အဘယ်ကြောင့် သေရည်အရက်များ သုံးစွဲနေသူများရှိနေသနည်း။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်ပြောလျှင်ပြောစရာများနေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူနှင့်အနီးစပ်ဆုံး ပအိုဝ်းလူမျိုးတို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမျာ အခြေအနေကိုသာ တင်ပြလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပအိုဝ်းလူမျိုးများသည် အများအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသူများပင်ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေထိုင်လိုသူများဖြစ်သကဲ့သို့ သူတစ်ပါးကို နားလည်ခွင့်လွတ်တတ်သူများလည်းဖြစ်သည်။ မကောင်းမှုပြုလျှင် မကောင်းမှုခံရမည်ကိုလည်း ယုံကြည်ကြသည်။ အလှူအဒါန်းရက်ရောကြသူများလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် သဒ္ဓါဓိကဗုဒ္ဓဘာသာထဲတွင် ပါဝင်နေသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရသည်မှာ မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကို ဖြန့်ဝေပေးနေသော သံဃာတော်များ အားကောင်းခြင်းနှင့် ပအိုဝ်းမော်များရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ကုလဗုဒ္ဓဘာသာထဲတွင် ရှိနေသည်ဟု ယူဆစရာရှိနေပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာ တွေးခေါ်နိုင်သည့် ပညာရေးစနစ်ကို မဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသည်က တစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုတိုင်ကြိုးစားလေ့လာမှု နည်းပါးသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်လွမ်းမိုးခံရမှု ရှိနေသည်ကတစ်ကြောင်း ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။
စာရေးသူအပါအဝင် လက်ရှိမိမိတို့ပအိုဝ်းလူမျိုးသာမက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုသည် ဓလေ့ထုံးတမ်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်သိမြင်နေကြသည်ဟု မြင်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လပြည့်လကွယ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမည်၊ တရားနာမည်၊ လူကြီးကန်တော့မည်၊ ဆွမ်းတော်ကပ်မည် (လောင်,၊ ကပ်သွမ်တော;)၊ ဘုံကထိန်လှည့်မည် စသဖြင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ လုပ်ဆောင်နေသည့်အပိုင်းတွင်သာ သိရှိထားကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဆရာတော်က ပါဠိလိုဟော်လျှင် ဘာမှပင် နားမလည်းတော့ပေ။ ဤသည်ပင် ဗုဒ္ဓဘာသာဟု မိမိကိုယ်ကို မှတ်ယူနေကြသည်။ အမှန်မှာ ထိုအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးနေသာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုသာဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိသည်မှာ မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု၏အသိထဲတွင် မြတ်စွာဘုရား ရှင်၏ တရားတော်၊ အဆုံးအမများသည် မိမိတို့နှင့် မဆိုင်၊ သံဃာတော်များနှင့်သာဆိုင်သည်ဟု ယူဆနေကြသည်။ ဆရာတော်ဟောသည့်အတိုင်းသာ လိုက်နာကြ၊ ပအိုဝ်းမော်ဟောသည့်အတိုင်းသာ ယုံကြည်ကြသည်။ မိမိကိုယ်ကို အနေဖြင့် ဤအရာသည် မှားနေသလား၊ မှန်နေသလား မသိတော့ချေ။
ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုသည် ထိုသို့ပေါ့လျော့သော အယူအဆများကြောင့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဇာတ်တော်များ၊ တရားတော်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတများအား သိရှိနားလည်မှု အားနည်းခဲ့ကြရသည်ဟု မြင်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သာသနာတိုးပွားလာစေရန်နှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲရန် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် တာဝန်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတများကို အနည်းအကျဉ်းသိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့သိရှိမှသာ သူတစ်ပါးအားပြောပြနိုင်မည်၊ ဆွဲဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယခုအနေအထားအရ သူတစ်ပါးကို ဆွဲဆောင်ဖို့ နေနေသာသာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို လျစ်လျူရှုနေကြသည်နှင့် တူနေပါသည်။
အကယ်၍ ဘာသာခြားက ကျွန်ုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို မေးမြန်းလာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ အဖြေပြန်ပေးမည်နည်း။ ဥပမာအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ပန်းတိုင်/ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ၊ မြတ်စွာဘုရားကို ဘာကြောင့် ရှိခိုးသင့်လဲ၊ ပဌာန်းရွတ်ရင် ဘာကောင်းကျိုးရမလဲ၊ မြတ်စွာဘုရားက သစ္စာတရားလေးပါးကို ဘာလို့ ဟောခဲ့တာလဲ၊ ဝါတွင်းသုံးလတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘာကြောင့် အိမ်ထောင်မပြုကြတာလဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ၊ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ၊ သံဃာတော်တွေဘာကြောင့် ဆံပင်ရှည်ထားခွင့်မရှိတာလဲ စသဖြင့် မေးမြန်းစရာမေးခွန်းများစွာ ရှိသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လေ့လာစရာ အကြောင်းအရာများလည်း များစွာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကုန်လုံး မသိနိုင်တောင်ပင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံသဘောတရားများကို သိရှိထားသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ သိရှိမှသာလျှင် မိမိအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး စစ်စစ်ဖြစ် ကြောင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြသနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယခုဆိုလျှင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများသည် မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကို အာရုံပြုလာကြပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် စပိန်၊ ဒူဘိုင်း၊ အင်္ဂလန်၊ အိန္ဒိယစသည့် နိုင်ငံတို့တွင် စေတီတည်ကြ၊ တရားစခန်း ဖွင့်ကြနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကြသော သတင်းများ ဖတ်ရှုခဲ့ရသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန့်ပွားအောင် ကြိုးစားအားထုတ်နေသော ဆရာတော်များအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ စာသင်ကျောင်းပေါင်း(၃၇၀)ကျော်တွင် သတိပဌာန်းကျင့်စဉ်နှင့် တရားထိုင်ခြင်း အလေ့ကျင့်ကို ကလေးငယ်များအတွက် ကျောင်းသုံးသင်ရိုးအဖြစ် ပြဌာန်းပေးလိုက်ပြီဟု သတင်းများတွင် ဖတ်ရှုခဲ့ ရပါသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသူ ဘဏ်သူဌေးမတစ်ဦးဖြစ်သည့် အယ်မာစလိတ်(Emma Slade)သည် သူမ၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာများကို စွန့်လွတ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သီလရှင်အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားသော သာဓကများလည်း ဖတ်ရှုခဲ့ဖူးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်များကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာကျင့်သုံးပြီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကြသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များကို ပညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာများဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး ဘာသာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားသော မွန်မြတ်လှသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ တရားတော်အဆီအနှစ်များ၊ ဗဟုသုတများကို ကိုယ်တိုင်ကိုကျ လေ့လာသိရှိပြီး အတူတကွ ကြိုးစားအားထုတ်ကြကာ “စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကြစို့” ဟု တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ကြှနျတျောတို့တှေ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျစဈစဈ ဖွဈပွီလား…??
တောငျကွီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ (၂၇)ရကျ
အရှငျတဇေနိယ(အုတျဖို) ရေးသားသော ဆောငျးပါးတဈပုဒျတှငျ “နောငျအခါ၌ ဗုဒ်ဓဘာသာ(၅) မြိုး ရှိလာလိမျ့မညျဟု မွတျစှာဘုရားရှငျက ဟောထားကွောငျး” ဆိုသညျ့အကွောငျးကို ဖတျရှုခဲ့ဖူးပါ၏။ ၎င်းငျး(၅)မြိုးမှာ ကုလဗုဒ်ဓဘာသာ၊ လာဘဗုဒ်ဓဘာသာ၊ ဘယဗုဒ်ဓဘာသာ၊ သဒ်ဓါဓိကဗုဒ်ဓဘာသာနှငျ့ ပညာဓိက ဗုဒ်ဓဘာသာတို့ဖွဈသညျဟု အရှငျတဇေနိယ(အုတျဖို)က တဈမြိုးခွငျးစီကို အကယျြတဝငျ့ ရေးသားရှငျးပွထားပါသညျ။ သို့သျော စာရေးသူအနနှေငျ့ ဤဗုဒ်ဓသာသာ (၅)မြိုးကို အကဉျြးခြုပျ အနဖွေငျ့သာတငျပွလိုပါ၏။ အကွောငျးမှာ စာရေးသူအနနှေငျ့ ဤဗုဒ်ဓသာသာ (၅)မြိုးအကွောငျးကို သိစခေငျြတာထကျ မိမိတို့သညျ မညျသညျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာအဆငျ့တှငျ ရှိနသေညျကို သုံးသပျစလေိုခွငျးသာ ဖွဈသညျ။
ပထမဦးဆုံး ကုလဗုဒ်ဓဘာသာကို အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ရမညျဆိုလြှငျ မိရိုးဖလာလကျဆငျ့ကမျးခံရခွငျးဟု ပွောရမညျထငျပါသညျ။ အကွောငျးမှာ ဗုဒ်ဓသာသာဝငျ မိဘနှဈပါးက မှေးထုတျလိုကျသော ကလေးသညျ အလိုအလြောကျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ ဖွဈသှားသကဲ့သို့ အခွားခရဈယာနျ၊ အစ်စလာမျဝငျ၊ ဟိန်ဒူတို့၏ ကလေးသညျလညျး ထိုအတိုငျးပငျဖွဈသညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ အဖအေမေ၊ ဘိုးဘှားခတျေက ကိုးကှယျခဲ့သောကွောငျ့ မိမိအနဖွေငျ့ လိုကျကိုးကှယျပွီး မညျသညျ့အတှကျကွောငျ့ ကိုးကှယျရသညျကိုလညျး သခြောမသိ၊ ဗုဒ်ဓဘာသာ၏ အနှဈသာရကိုလညျးမသိ၊ လုပျတော့လုပျနသေညျ ဘာလုပျနမှေနျး သခြောမသိသညျ့ အဖွဈမြိုးကိုဆိုလိုသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ပွောရလြှငျ ပညာမပါသညျ့ အဖွဈမြိုးကို ဆိုလိုခွငျး ဖွဈသညျ။ ဒုတိယလာဘဗုဒ်ဓဘာသာဆိုသညျမှာ ကိုယျကြိုးစီးပှားတိုးပှားရနျအတှကျ ကိုးကှယျခွငျးဟု ဆိုနိုငျပါသညျ။ မွတျစှာဘုရားကို ကိုးကှယျမှ စီးပှားတကျမညျ။ အလုပျအကိုငျ အဆငျပွမေညျဟု ထငျမွငျသူမြားဖွဈသညျ။ ဤပုဂ်ဂိုလျမြားသညျ ဗဒေငျ၊ နတျတို့ကိုလညျး သကျဝငျယုံကွညျ ကိုးကှယျသူ မြားဖွဈသညျ။ နောကျဘယဗုဒ်ဓဘာသာ ဆိုသညျမှာ ဘေးရနျအန်တရာယျလှတျကငျးလိုခွငျးဟု အဓိပ်ပာယျရပါသညျ။ အကွောငျးမှာ အန်တရာယျကငျးရနျ၊ ကနျြးမာရနျ၊ အသကျရှညျရနျအတှကျ ကိုးကှယျခွငျးကိုဆိုလိုသညျ။ ဤကုလဗုဒ်ဓဘာသာ၊ လာဘဗုဒ်ဓဘာသာ၊ ဘယဗုဒ်ဓဘာသာတို့သညျ အကြိုးမပွုသော၊ အဆငျ့နိမျ့သော ဗုဒ်ဓဘာသာမြားဖွဈသညျဟု အရှငျတဇေနိယ(အုတျဖို)က ရေးသားထားပါသညျ။
သဒ်ဓါဓိကဗုဒ်ဓဘာသာဆိုသညျမှာ သဒ်ဓါတရား(ယုံကွညျခကျြ)ကို အခွခေံခွငျးဟုဆိုနိုငျသညျ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူသော ရတနာ(၃)ပါးကို သကျဝငျယုံကွညျသူမြား ဖွဈသညျ။ ကောငျးမှုလုပျလြှငျ ကောငျးကြိုးရမညျ။ မကောငျးမှုလုပျလြှငျ ဆိုးကြိုးရမညျဆိုသညျကို လကျခံယုံကွညျသူမြားလညျးဖွဈသညျ။ အထူးသဖွငျ့ မွတျစှာဘုရားဟောကွားတျောမူသော တရားတျေျာမြားကို သိရှိသူ၊ ယုံကွညျသူမြား ဖွဈသညျ။ သဒ်ဓါတရားသညျ ယုံကွညျခကျြဖွဈသောကွောငျ့ ကောငျးသောယုံကွညျခကျြနှငျ့ မကောငျးသော ယုံကွညျခကျြမြားလညျး ဖွဈတတျပါသညျ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့ကို မှနျမှနျကနျကနျ ယုံကွညျလြှငျ သမ်မာသဒ်ဓါဟုချေါဆိုပွီး မှနျမှနျကနျကနျ မယုံကွညျပါက ကုလ၊ လာဘ၊ ဘယ စသညျ့ဗုဒ်ဓဘာသာ အဆငျ့တှငျသာရှိနမေညျဖွဈသောကွောငျ့ ၄ငျးကို မိစ်ဆာသဒ်ဓါဟု ဆိုလိုပါသညျ။ နောကျ ပညာဓိကဗုဒ်ဓဘာသာ ဆိုသညျမှာ မွတျစှာဘုရားဟောကွားတျောမူသော သစ်စာတရားလေးပါးတရားကို သခြောသိရှိပွီး ကိုယျတိုငျကငျြ့ကွံသူဟု ဆိုနိုငျပါသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ အဆိုပါပုဂ်ဂိုလျမြားသညျ အယုံလှယျသူမဟုတျ၊ မိမိကိုယျတိုငျစမျးသပျကငျြ့ကွံပွီးမှသာ ပညာနှငျ့ ဆုံးဖွတျသူမြားဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သဒ်ဓါဓိကဗုဒ်ဓဘာသာနှငျ့ ပညာဓိကဗုဒ်ဓဘာသာသညျ အထကျတနျးကပြွီး မွငျ့မွတျသညျဟု ဆိုထားပါသညျ။
ဤသို့ဆိုလြှငျ ယနဗေု့ဒ်ဓဘာသာနိုငျငံဟု လူသိမြားသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသညျ အထကျတှငျ မွတျစှာဘုရားရှငျ ဟောကွားခဲ့သညျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ(၅)မြိုးတှငျ မညျသညျ့ဗုဒ်ဓဘာသာအဆငျ့တှငျ ရှိနသေနညျး။ မွတျစှာဘုရားရှငျ ဟောကွားခဲ့သညျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ(၅)မြိုးစလုံး မွနျမာနိုငျငံတှငျ ရှိနပွေီလား။ စဉျးစားစရာရှိလာပါသညျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ ထိုဗုဒ်ဓဘာသာ (၅)မြိုးသညျ ရှိကိုရှိလာမညျ့ သဘောရှိ၏။ ထို့ကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့သညျ မညျသညျ့ဗုဒ်ဓဘာသာထဲတှငျ ပါဝငျရမညျနှငျ့ ပါဝငျနသေညျကို သာသိရှိရနျသာ ကနျြပါတော့သညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ တခြို့သော ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြားသညျ ဗဒေငျယုံကွညျမှု၊ တောငျပွုံးပှဲကဲ့သို့ နတျကိုးကှယျမှုမြားကို အဘယျကွောငျ့ အရှုးအမှုး(crazy)ဖွဈနရေသနညျး။ ဗုဒ်ဓဘာသာပှဲအမညျတပျပွီး အဘယျကွောငျ့ သရေညျအရကျမြား သုံးစှဲနသေူမြားရှိနသေနညျး။ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးနှငျ့ပွောလြှငျပွောစရာမြားနလေိမျ့မညျ။ ထို့ကွောငျ့ စာရေးသူနှငျ့အနီးစပျဆုံး ပအိုဝျးလူမြိုးတို့၏ ဗုဒ်ဓဘာသာအပျေါကိုးကှယျယုံကွညျမှုမြာ အခွအေနကေိုသာ တငျပွလိုပါသညျ။
ကြှနျုပျတို့ ပအိုဝျးလူမြိုးမြားသညျ အမြားအားဖွငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာကို ကိုးကှယျယုံကွညျကွသူမြားပငျဖွဈသညျ။ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးနထေိုငျလိုသူမြားဖွဈသကဲ့သို့ သူတဈပါးကို နားလညျခှငျ့လှတျတတျသူမြားလညျးဖွဈသညျ။ မကောငျးမှုပွုလြှငျ မကောငျးမှုခံရမညျကိုလညျး ယုံကွညျကွသညျ။ အလှူအဒါနျးရကျရောကွသူမြားလညျး ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ သဒ်ဓါဓိကဗုဒ်ဓဘာသာထဲတှငျ ပါဝငျနသေညျဟုဆိုနိုငျပါသညျ။ ထိုသို့ ဖွဈရသညျမှာ မွတျစှာဘုရားတရားတျောကို ဖွနျ့ဝပေေးနသေော သံဃာတျောမြား အားကောငျးခွငျးနှငျ့ ပအိုဝျးမျောမြားရှိနခွေငျးကွောငျ့ပငျဖွဈမညျထငျပါသညျ။ သို့သျောလညျး အခွားတဈဖကျတှငျလညျး ကုလဗုဒ်ဓဘာသာထဲတှငျ ရှိနသေညျဟု ယူဆစရာရှိနပေါသညျ။ ဤသို့ဖွဈရသညျမှာ တှေးချေါနိုငျသညျ့ ပညာရေးစနဈကို မဖွတျသနျးခဲ့ဖူးသညျက တဈကွောငျး၊ ကိုယျကိုတိုငျကွိုးစားလလေ့ာမှု နညျးပါးသညျကတဈကွောငျး၊ ပတျဝနျးကငျြလှမျးမိုးခံရမှု ရှိနသေညျကတဈကွောငျး ဖွဈမညျထငျပါသညျ။
စာရေးသူအပါအဝငျ လကျရှိမိမိတို့ပအိုဝျးလူမြိုးသာမက ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအမြားစုသညျ ဓလထေုံ့းတမျးကို ဗုဒ်ဓဘာသာအဖွဈသိမွငျနကွေသညျဟု မွငျမိပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့၏ အသိတှငျ ဗုဒ်ဓဘာသာသညျ လပွညျ့လကှယျဘုနျးတျောကွီးကြောငျးမညျ၊ တရားနာမညျ၊ လူကွီးကနျတော့မညျ၊ ဆှမျးတျောကပျမညျ (လောငျ,၊ ကပျသှမျတော;)၊ ဘုံကထိနျလှညျ့မညျ စသဖွငျ့ ဓလထေုံ့းတမျးအရ လုပျဆောငျနသေညျ့အပိုငျးတှငျသာ သိရှိထားကွသညျ။ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတှငျ ဆရာတျောက ပါဠိလိုဟျောလြှငျ ဘာမှပငျ နားမလညျးတော့ပေ။ ဤသညျပငျ ဗုဒ်ဓဘာသာဟု မိမိကိုယျကို မှတျယူနကွေသညျ။ အမှနျမှာ ထိုအရာမြားသညျ ကြှနျုပျတို့ကငျြ့သုံးနသော ဓလထေုံ့းတမျးတဈခုသာဖွဈ၍ ဗုဒ်ဓဘာသာ၏ အစိတျအပိုငျးတဈခုမြှသာဖွဈသညျ။ နောကျတဈခုပွောစရာရှိသညျမှာ မိမိတို့ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအမြားစု၏အသိထဲတှငျ မွတျစှာဘုရား ရှငျ၏ တရားတျော၊ အဆုံးအမမြားသညျ မိမိတို့နှငျ့ မဆိုငျ၊ သံဃာတျောမြားနှငျ့သာဆိုငျသညျဟု ယူဆနကွေသညျ။ ဆရာတျောဟောသညျ့အတိုငျးသာ လိုကျနာကွ၊ ပအိုဝျးမျောဟောသညျ့အတိုငျးသာ ယုံကွညျကွသညျ။ မိမိကိုယျကို အနဖွေငျ့ ဤအရာသညျ မှားနသေလား၊ မှနျနသေလား မသိတော့ခြေ။
ကြှနျုပျတို့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအမြားစုသညျ ထိုသို့ပေါ့လြော့သော အယူအဆမြားကွောငျ့ မွတျစှာဘုရား၏ ဇာတျတျောမြား၊ တရားတျောမြားနှငျ့ သကျဆိုငျသော ဗဟုသုတမြားအား သိရှိနားလညျမှု အားနညျးခဲ့ကွရသညျဟု မွငျမိပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြားသညျ ဗုဒ်ဓဘာသာ၊ သာသနာတိုးပှားလာစရေနျနှငျ့ တညျတံ့ခိုငျမွဲရနျ ထိနျးသိမျးကာကှယျရမညျ့ တာဝနျရှိပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကြှနျုပျတို့ကိုယျတိုငျအနဖွေငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာနှငျ့သကျဆိုငျသော ဗဟုသုတမြားကို အနညျးအကဉျြးသိရှိထားရနျ လိုအပျပါသညျ။ ထိုသို့သိရှိမှသာ သူတဈပါးအားပွောပွနိုငျမညျ၊ ဆှဲဆောငျနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ ယခုအနအေထားအရ သူတဈပါးကို ဆှဲဆောငျဖို့ နနေသောသာ ကြှနျုပျတို့ကိုယျတိုငျပငျ ဗုဒ်ဓဘာသာကို လဈြလြူရှုနကွေသညျနှငျ့ တူနပေါသညျ။
အကယျ၍ ဘာသာခွားက ကြှနျုပျတို့ဗုဒ်ဓဘာသာအကွောငျးကို မေးမွနျးလာလြှငျ ကြှနျုပျတို့ မညျကဲ့သို့ အဖွပွေနျပေးမညျနညျး။ ဥပမာအားဖွငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ၏ ပနျးတိုငျ/ရညျရှယျခကျြက ဘာလဲ၊ မွတျစှာဘုရားကို ဘာကွောငျ့ ရှိခိုးသငျ့လဲ၊ ပဌာနျးရှတျရငျ ဘာကောငျးကြိုးရမလဲ၊ မွတျစှာဘုရားက သစ်စာတရားလေးပါးကို ဘာလို့ ဟောခဲ့တာလဲ၊ ဝါတှငျးသုံးလတှငျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှဘောကွောငျ့ အိမျထောငျမပွုကွတာလဲ၊ ဗုဒ်ဓဘာသာ ဘယျနှဈမြိုးရှိလဲ၊ နိဗ်ဗာနျဆိုတာဘာလဲ၊ သံဃာတျောတှဘောကွောငျ့ ဆံပငျရှညျထားခှငျ့မရှိတာလဲ စသဖွငျ့ မေးမွနျးစရာမေးခှနျးမြားစှာ ရှိသကဲ့သို့ ကြှနျုပျတို့အနဖွေငျ့လလေ့ာစရာ အကွောငျးအရာမြားလညျး မြားစှာရှိပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အကုနျလုံး မသိနိုငျတောငျပငျ ဗုဒ်ဓဘာသာ အခွခေံသဘောတရားမြားကို သိရှိထားသငျ့ပါသညျ။ ထိုသို့ သိရှိမှသာလြှငျ မိမိအနဖွေငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတဈဦး စဈစဈဖွဈ ကွောငျး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပွသနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
ယခုဆိုလြှငျ ကမ်ဘာအရပျရပျရှိ ကမ်ဘာသူကမ်ဘာသားမြားသညျ မိမိတို့ဗုဒ်ဓဘာသာကို အာရုံပွုလာကွပွီ ဖွဈသညျ။ ယခုနှဈတှငျ စပိနျ၊ ဒူဘိုငျး၊ အင်ျဂလနျ၊ အိန်ဒိယစသညျ့ နိုငျငံတို့တှငျ စတေီတညျကွ၊ တရားစခနျး ဖှငျ့ကွနှငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာသို့ ကူးပွောငျးကွသော သတငျးမြား ဖတျရှုခဲ့ရသောကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတဈယောကျအနဖွေငျ့ အတိုငျးမသိ ဝမျးသာပီတိ ဖွဈရပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ပွနျ့ပှားအောငျ ကွိုးစားအားထုတျနသေော ဆရာတျောမြားအား အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျမိပါသညျ။ ယခုဆိုလြှငျ အင်ျဂလနျနိုငျငံ စာသငျကြောငျးပေါငျး(၃၇၀)ကြျောတှငျ သတိပဌာနျးကငျြ့စဉျနှငျ့ တရားထိုငျခွငျး အလကေ့ငျြ့ကို ကလေးငယျမြားအတှကျ ကြောငျးသုံးသငျရိုးအဖွဈ ပွဌာနျးပေးလိုကျပွီဟု သတငျးမြားတှငျ ဖတျရှုခဲ့ ရပါသညျ။ ဗွိတိနျနိုငျငံသူ ဘဏျသူဌေးမတဈဦးဖွဈသညျ့ အယျမာစလိတျ(Emma Slade)သညျ သူမ၏ စညျးစိမျဥစ်စာမြားကို စှနျ့လှတျပွီး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျသီလရှငျအဖွဈသို့ ကူးပွောငျးသှားသော သာဓကမြားလညျး ဖတျရှုခဲ့ဖူးပါသညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ အဆိုပါ ပုဂ်ဂိုလျမြားသညျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျစဈစဈဖွဈသညျဟု ဆိုနိုငျပါသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ထိုပုဂ်ဂိုလျမြားသညျ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား၏ တရားတျောမြားကို ကိုယျတိုငျကိုယျကြ လလေ့ာကငျြ့သုံးပွီးမှ ဗုဒ်ဓဘာသာသို့ ကူးပွောငျးကွသူမြားဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ၎င်းငျးပုဂ်ဂိုလျမြားကို ပညာဓိကဗုဒ်ဓဘာသာမြားဟု ချေါဆိုနိုငျပါသညျ။
ဗုဒ်ဓဘာသာသညျ ကမ်ဘာပျေါတှငျ အကောငျးဆုံး ဘာသာတဈခုအဖွဈ သတျမှတျနသေညျကို ကြှနျုပျတို့ အားလုံးသိရှိပွီးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လကျရှိကြှနျုပျတို့ ပိုငျဆိုငျထားသော မှနျမွတျလှသညျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ၏ တရားတျောအဆီအနှဈမြား၊ ဗဟုသုတမြားကို ကိုယျတိုငျကိုကြ လလေ့ာသိရှိပွီး အတူတကှ ကွိုးစားအားထုတျကွကာ “စဈမှနျသော ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြားအဖွဈသို့ ပွောငျးလဲကွစို့” ဟု တိုကျတှနျး ရေးသားလိုကျရပါသညျ။